Iindaba - Ukubek'esweni nokugcinwa kweTransformer
Ukuze kuqinisekiswe ukusebenza okuqhelekileyo kwe-transformer, kufuneka ihlolwe rhoqo kwaye igcinwe.
I-1 Ixabiso lokubonisa ubushushu bomlawuli weqondo lokushisa kufuneka libekwe esweni rhoqo, ukusebenza kwe-transformer kufuneka kubanjwe ngexesha, kwaye ingqalelo kufuneka ihlawulwe ukuba kukho nasiphi na isandi esingaqhelekanga kunye nokunyakaza.
2 Xa umthwalo wesigaba sesithathu se-transformer ungalingani, okwangoku kwinqanaba elikhulu kunye nokushisa kwesigaba esiphezulu kufuneka kubekwe iliso.Ubuninzi obuvumelekileyo bexesha elingathathi hlangothi le-transformer edibeneyo kwi-Yyn0 yi-25% ye-low-voltage current.Ubuninzi bexesha elingathathi hlangothi elivunyelwe yi-Dyn11 i-transformer inokufana nomgca ophantsi wangoku.
3 Xa i-transformer ineemeko ezilandelayo, ezifana nokusebenza okungaqhelekanga kwefeni;umboniso wobushushu obungaqhelekanga;iintanda ezincinci ekubonakaleni kwe-insulation ye-resin ejikelezayo, njl., Akuvumelekanga ukuba iqhube ngaphaya kwegama legama.Fumana isizathu okanye uqhagamshelane nomvelisi ukuze uqinisekise.
4 Kwiindawo ezomileyo nezicocekileyo ngokubanzi, jonga kanye ngonyaka okanye nangaphezulu;kwezinye iindawo, njengokubaleka kuthuli okanye umoya obhudlayo, jonga rhoqo emva kweenyanga ezintathu ukuya kwezintandathu.Kwiindawo ezingcoliseke kakhulu, uhlolo lokugcinwa kokucinywa kombane kufuneka lwenziwe rhoqo ngenyanga.
5 Ngexesha lokuhlola, ukuba ukuqokelela ngokugqithiseleyo uthuli kufunyenwe, kufuneka kususwe ukuze kuqinisekiswe ukujikeleza komoya kunye nokuthintela ukuchithwa kwe-insulation, kodwa ii-agent ezihlambulukileyo zokucoca akufanele zisetyenziswe.Umoya ocinezelweyo uvuthela uthuli kwimibhobho yokuphefumla.Ulwalathiso lokuhamba komoya ocinezelweyo luchasene nomoya opholileyo xa i-transformer isebenza.
6 Khangela ukuba ngaba izibophelelo kunye neziqhagamshelo zikhululekile, ukuba iindawo zokuqhuba kunye nezinye iindawo zinemizila ye-rust kunye ne-corrosion, kwaye ujonge ukuba ngaba kukho imikhondo ye-carbonization kunye ne-corrosion yombane kumphezulu we-insulating.Ukuba ifunyenwe, thabatha amanyathelo afanelekileyo okujongana nayo.
Ngolwazi oluthe kratya malunga ne-transformer, unokujonga eli nqaku:Amanyathelo okhuseleko